The undesired - Part 20 | Apg29
The kuenderera ambopinda nyaya pauduku hwangu sezvo mwana ane ndisingadiwi.
mukirasi yangu yakanga chimedu vandaimboshanda navo mukirasi kuti ndaiva apo ndakaenda Torpa chikoro. Vakanga yakaguma pakati meimba chikoro apo ini dzakaguma sezvariri mune pakona oblong chivakwa. Kuti vasvike kune kirasi yekare, ndaifanira kuenda pakati ari refu mukoridho uye ipapo kurudyi. Zvino zvakaitika kuti ini kudaro dzimwe nguva.
Pane imwe nguva, ndakasangana muKristu, raiva mukomana kuti ini zvakaitika mune kurwa vaine chikoro kupfura, makore anoverengeka apfuura. Handina chii takataura pamusoro asi zvakanga zvine rugare. Mains tataura pakati pemapoka evanhu vemamwe vadzidzi chaiitika panguva zvigaro, lockers chikoro uye Mabhachi achangoerekana musikana akauya kwandiri uye anoti:
"Hamuna chero yokugezera pamba saka unogona kusuka bvudzi rako zara mafuta?"
Ndakashamiswa uye havana kuziva zvokutaura, uye kwaingova akanyarara. Christian havana kuziva zvaakanga aiti kana akaedza achisekerera neurombo kure. Sezvo musikana akabvuma. Handina kuziva ani akanga, asi zvakanga kurwadza kwazvo kwandiri.
It kundikuvadza nekuti ndakanga uchinetswa rangu mafuta uye zara mafuta bvudzi. The mushonga nokuti, ndaiziva vanofanira huchadururira zvakawanda kana kanenge kusuka kakawanda, asi ndakanga ndisipo wangu mai vokugara. Mangoti ndaida kutora yokugezera kana kushambidza bvudzi rangu saka handina kundoitora. I vakatambura pamba nokuti ndakanga ndisingagoni kugeza uye ini akatambudzwa kuchikoro nokuti ndaifanira kufamba famba rangu zara mafuta bvudzi. Ini akatambudzika uye vakanetseka nokuti uye yakanyanya hainyatsozivikanwi uye mwoyo wangu kare kusanyatsozviremekedza.
Zvichida waiva mai vangu vokurera opsykologiska maitiro wake murombo background. Akanga adzidza kuti tichengetedze zvose. Izvi urombo Kufunga kuti kuenda naye kwemakore akawanda, kunyange akanga takapfuma mari. Iye aibvuma haana chinhu, asi akafamba Worn uye vakwegura nguo. Akanga zvinopfuura kutenga chinhu chitsva uye yakachena, asi iye haana.
Kana akanga maitiro ake kuti iye aitya yangu zvinosimudzira baba. Handizivi, asi iye akanga kwemakore zvikuru vakakundwa naye. dzimwe nguva aiti zvinhu unflattering pamusoro murume isu vana kana haana kunzwa.
Pandinofunga nezvazvo, iye zvinhu haana zvakadai pamusoro wake, asi Ukuwo, akati zvavo kumbobvira chinhu. Pasina shoko, aigona kuenda kumwe chete motokari yake. Amai vangu vokurera kumboziva paakanga kana akaita. Kana kuti iye akanyunyuta vana kwatiri, asi haana vakati zvakananga kwaari. Handina kumbobvira vakavaona nharo, asi maitiro ichi chaiva chikuru chinetso. Kutaurirana pakati pavo akanga afa zvachose, uye zvakanga ichi kuti ini akakura. Hauna kutaura nomumwe.
Baba vangu vokurera aisvuta nenyere, akanga zvavakaita kubva nemakore gumi nemana, asi akanga haanetseki booze. Yakanga vodka nezvimwe mabhodhoro rinodhaka riri pasherufu iri pandiri, asi haana kunwa pachake kubva kwavari, asi kamwe chete vaivamo vaenzi pamusha kuti akapa zvishoma schnapps.
Asi ikozvino shure wangu zara mafuta bvudzi. Ndakabayiwa haunted iyi asi havana kuziva sei kurigadzirisa. Panguva iyoyo vakomana rebei bvudzi, kwandaiva. Ndaida bvudzi pamusoro nzeve dzangu kuti havana kuoneka. Ndakanga kanopfuura kamwe wakambonetswa nokuva huru uye yakabudikira nzeve se "mamwe masoja" dzangu nembama pavari shure neminwe yavo saka vakanga zvakajeka dzvuku. Asi nekuti bvudzi rangu raiva saka zara mafuta uye mafuta saka zvakanga zvisiri akanaka, asi akaturika Lenke uye dzakashata pasi uye vakakomberedza nenzeve. Oh zvandakanga uchinetswa Lenke yangu bvudzi!
Pazvakava kutonhora kurutivi kuwa pamucheto vakatanga varumudzani German kuchikoro. Mukomana nemusikana. Ivo vanotsika mubhazi pane rurege kwandiri. Vaiva zvishoma nguo zvakasiyana pane isu yeSweden sezvo ndakacherechedza navo. The musikana aiva refu, mhotsi dzangu yakaisvonaka, uye mukomana akanga zvikabudura kunyange zvazvo mamiriro ekunze akanga zvichiwedzera kutonhora. Asi kunyange vaida kugara pamwe mukomana chete Lenke zara mafuta bvudzi bhazi rechikoro. Ndinorangarira kuti zvigaro pedyo neni yakanga isina asi vakagara kumashure bhazi. Ndakafunga nokuti ndakanga vanonyombwa kudaro vaizova kupinda muchikwata pamwe mih uye pachavo kuti kutyisidzirwa.
Pandakapedza mugiredhi rechitanhatu, ndakanga lousy ratings. Handina kukwanisa kuita zvakanaka Torpa chikoro nekuti ndakanga saka cowed uye kutyisidzirwa. My chivimbo haana chete wakaitwa pasi shangu, asi hakuna. Nokuda kuti ndaigona utize vanodheerera angu, ndakaiswa boka yakasiyana chesekondari kwavakanga kuverenga zvishoma leisurely kumhanya. Ipapo akaenda kwazvo kwandiri. I zvakanaka kwazvo mukirasi uye raiva hapana vandinodzidza navo uyo kutyisidzirwa neni. All vaiva shamwari, kunyange kana vasiri socialized nevamwe kana akaziva navo.
Takavawo zvimwe vatamira kirasi wakanga asina nevakawanda panguva iyoyo. Mumwe Lebanon, waiva mukuru kupfuura vamwe vedu, mumwe kubva Turkey uye mumwe wokuGreece makore maviri. Pakange pasina dambudziko navo uye ivo vanonyombwa kana munhu.
Sezvo Ndingadai gare gare kuguma chesekondari mugiredhi rechi9, ndaiva shasha muchikoro uye aiva 4.7 paavhareji. Panguva iyoyo vaiva vashanu-pfungwa pamwero kuchikoro. Mumwe aiva zvakaipisisa, apo nzvimbo wechishanu aiva zvakanakisisa.
Kunyange zvazvo pakanga pasina mumwe mukirasi yangu uyo ​​kutyisidzirwa ini saka paiva nevadzidzi kubva mamwe makirasi vaiita izvozvo. Stefan, refu tamba blond mukomana, atora pamusoro basa neni Vanodheerera. Aigona kudanidzira paanokutsvinyira kwandiri saka vadzidzi vose kumativi vaigona kunzwa. Zvakanga zvinonyadzisa uye kunyadzisa. Handizivi sei akaita saizvozvo. Zvakanga zvakadaro. Yakanga mugove wangu akapa pachangu mairi. Ndakanga kubva pakutanga nguva akurira mairi saka handina kuziva chimwe chinhu.
Ndapedza chikoro, akakwanisa kuramba uye Vanodheerera Paakangotaura neni akaona ini kwese. Handina kunzwisisa nei aizvibata kudaro.
Ndine muupenyu hwangu aiva murombo pfungwa mirayiridzo. Pane imwe nguva pashure rimwe zuva mitambo zvakarongwa nokuda chikoro saka handina kuwana nzira kudzokera kuchikoro apo bhazi kuenda.
Pandakamedurira vakadzungaira munzira ndakasangana nevamwe vadzidzi chikoro yangu akanga achifamba. Ndakasarudza kuvabvunza nzira. Vanofanira kunge yakacherechedza kuti vakarasika uye chokwadi ndakatarisa. Pakarepo vakatanga seka uye Vanodheerera ini nokuti ndakanga ndisingagoni kuva nzira. Vakadana kwandiri "kamhina" izvo ivowo vakauya Ndishevedze ramangwana wechikoro.
Asi ivo akanongedza zvakadaro kunze rktingen rworudyi kuti ndaienda kuenda kuchikoro. Ndaisagona kunzwisisa nei Vaizvinhonga kwandiri nekuti handina kuwana. Ndaizviziva kashoma.